(၂) နှစ်သား ကလေးငယ်က 999 ထံ ဖုန်းခေါ်ပြီး မိခင်၏ အသက်ကို ကယ်တင်
ပို့စ်တင်ချိန် - 4/02/2014 01:43:00 PM
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လီဆက်စတာရှိုင်းယားတွင် အသက် (၂) နှစ်သာ ရှိသေးသည့် ကလေးငယ် တစ်ဦးက ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ အရေးပေါ် ဖုန်းခေါ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူအား ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အိစ်မစ်ဒ်လန်း လူနာတင်ယာဉ် ဝန်ဆောင်မှု ဌာနက ရိုင်လီဝါ့ဒ်၏ သတင်းပေးမှုကြောင့် ၎င်း၏ မိခင်ကို အလျင်အမြန် သွားရောက် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ ရိုင်လီသည် မိခင်ဖြစ်သူ ရုတ်တရက် လဲကျသွားသည်ကို တွေ့ရှိပြီးနောက် 999 သို့ ဖုန်းခေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်သည် မိခင်ဖြစ်သူ ဒါနာဟင်နရီ၏ အခြေအနေ ပုံမှန် မဟုတ်သည်ကို သိရှိခဲ့သည့်တိုင် ၎င်း၏ အတွေးအခေါ် စွမ်းရည်အရ မည်သို့ ဖြစ်သွားသည်ကို ရှင်းမပြတတ်ချေ။ ရဲများက ဖုန်းထဲမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းသည့်အခါ ရိုင်လီက “မေမေ အိပ်ပျော်သွားတယ်” ဟုသာ ပြောဆိုခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဆက်သွယ် သတင်းပေးမှုကြောင့် ဖုန်းခေါ်သည့် နေအိမ်သို့ လူနာတင်ယာဉ်က ချက်ချင်းသွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒါနာကို ဆေးရုံသို့ အလျင်အမြန် တင်ပို့ခဲ့ရသည်။
ဒါနာသည် ဦးနှောက်တွင် သွေးခဲသွားခြင်း ဖြစ်ပြီး ယင်းကို ချက်ချင်းပင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ ရဲတပ်ဖွဲ့က မိမိတို့ထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုဖူးသည့် အသက်အငယ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်လေးကို ၎င်း၏ ရဲရင့်တည်ငြိမ်မှုအတွက် ဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ်လေးတစ်ခု လက်ဆောင်ပေး အပ်နှင်းခဲ့သည်။ အသက် (၂၇) နှစ်ရှိ ဒါနာသည် အခြေအနေ တိုးတက် သက်သာလာနေပြီး သူမ၏ သားကို “မေမေ့ သူရဲကောင်းလေး” ဟု ညွှန်းဆို ခေါ်ဝေါ်နေသည်။ ဒါနာနှင့် သူမ၏ ချစ်သူ ရော့ဘ်ဝါ့ဒ်တို့သည် ကလေးများကို ငယ်စဉ်ကတည်းက အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုတတ်ရန် သင်ကြားပေးထားကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ ပိုမိုဖတ်ရှုရန် ===> strange-news world-news
ကိုင်ရိုမှာ ဗုံးကွဲမှု ၂ မှုဖြစ် ရဲမှူးချုပ် သေဆုံး
စစ်တွေမှာ ဖမ်းဆီးမှုတွေ စတင်
စွန့်စွန့်စားစား မော်စကိုက ဓာတ်ပုံဆရာများ
မိုက်ကယ်လ်ဂျက်ဆင် အယ်လ်ဘမ်အသစ် မေလတွင် ထွက်မည်
သန်းခေါင်းစာရင်းမှာ ဂေါ်ရခါးလူမျိုး ထည့်သွင်းကြဖို့...
ပရိသတ်များကို လက်မှတ်ခ စိုက်ပေးရန် နောဝစ်ခ်ျ စီစဉ်ထား
လယ်တီသိမ် ဖြိုဖျက်တဲ့အပေါ် ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက် (ရုပ်သံ)
လေယာဉ်ပျောက် ခရီးသည်တွေ သံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန်...
Hepatitis A အသဲရောင် အသားဝါ (အေ)
ဦးဝင်းတင် ကျန်းမာရေး အမြန်ဆုံး ကောင်းလာဖို့ လူငယ်...
ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ နိုင်ငံရေးမှ အဖွဲ့အစည်းအခြေပြု နိုင်ငံ...
သမီးလေးရွာသားများကို ရှေ့ဆက်သွားခွင့်မပြုဟု ကရင်ပြ...
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ခန့်ထိန်းချုပ်ထားသော လက်နက်တင်ပို့ေ...
အယောင်ဆောင် သတင်းပေး၊ သတင်းယူသူများကို အရေးယူသွားမ...
မော်တော်ယာဉ် ‘၁က’ အက္ခရာများ ဧပြီ ၄ စအပ်ခွင့်ပြုမည်
Ovulation မျိုးဥကြွေဆေး နှင့် စမ်းသပ်နည်း
သာကေတ ငါးသေတ္တာစက်ရုံ ကိစ္စကို နိုင်ငံတကာသို့ ချပြသွ...
ဒါတွေသိပြီးမှ ကျိုက်ထီးရိုး သွားပါ။
Touch စနစ်သုံးဟန်းဆက်များ ရေဝင်၊ ရေစိုပါက ဘက်ထရီကိ...
ရွှေအများပိုင် ကုမ္ပဏီက ၂၀၀ ဂရမ်ရွှေပြားသစ်များ ထုတ်မည်
ရေစိုအ၀တ် ၀တ်လျက်ဖြင့် မီးချောင်းတပ်ဆင်ရာမှ အမျိုး...
ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံးမြို့ စင်္ကာပူ ဈေးအပေါဆုံးမြို့မ...
၁(က) ကားတွေ ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအဖြစ် အပ်နိုင်တော့မည်
ထိုင်းအစိုးရ ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြသမားတွေကို သေနတ်ပစ်ခ...
ရန်ကုန်မိုးကို ဆယ့်နှစ်ဘီလီယံဖြင့် ခုခံမည်
သီလ၀ါ မြေကွက်ဝယ်ထားသူတွေ Project Proposal အတိုင်းမ...
မိုးမကျခင် သိမ်းဆည်းခံ လယ်မြေတွေ ပြန်ပေးဖို့ သူရဦ...
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံမှု ပြည်သူအချို့ စိုးရိမ်ကြေ...
Samsung Galaxy S5 ကိုတောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွင် စတ...
လက်တင်အမေရိကတိုက်၏ အကြီးဆုံးလိင်မှုပြပွဲကို ဘရာဇီးတ...
အိမ်တစ်အိမ်၏ ပိုမွှားအများဆုံးနေရာ (၆)နေရာ
Michael Jackson မသေပါဆိုတာ april fool လုပ်တာလား?
အမျိုးသားချင်း ချစ်ကြိုက်သည့်ပုံစံမျိုး သရုပ်ဆောင်...
ချီလီ ကမ်းခြေတွင် ၈.၂ ပမာဏရှိသော ငလျင် လှုပ်ခတ်ပြီး...
သမီးလေးရွာသားတွေကို စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော...
စည်ပင်ခေါ်ဈေးနဲ့ သိန်းထောင်ချီ ကွာ ယဉ်ရပ်နားခလေလံ ...
ပြည်မြို့က ပြည်သူတစ်ဦးတင်ပြလာသည့် ခရီးသွားလာမှုနှ...
ယူကရိန်း ဝယ်ယူတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ဈေး ရုရှား တိုးမြှင့်
ရန်ကုန်က သပိတ်တွေ သိမ်းဖို့ တိုင်း အစိုးရပြော
မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတော်ကြီးကိစ္စကဲ့သို့ သံဃာအရေး နို...
စီအိုင်အေ က သတင်းအမှားတွေ နှစ်ပေါင်းများစွာပေးဟု ၀...
ဒီကေဘီအေနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ သမီးလေးကျေးရွာသားတွေ တားဆီ...
IUI နည်းနဲ့ ကလေးရစေခြင်း
ရိုဟင်ဂျာကို သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ချန်လှပ်မှု UNFPAေ...
သံင်္ဃာတော်(၁)ပါး လမ်းဘေးအုတ်ပုံဝင်တိုက် သေဆံုး
မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် မူလတန်ဖိုးအပေါ် မှတ်ပံ...
ဆန္ဒပြသူများအတွက် သီးသန့်နေရာ သတ်မှတ်မည်
ရုံးသမားများ အတွက် အလွယ်ကူဆုံး ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်...
မေတ္တာ ဆိုတဲ့တရားဟာ ဘာဝနာတရား
မိခင်က စိတ်ဝေဒနာသည်သားကို သတ်လွှစက်နဲ့ အပိုင်းပိုင်...
Mozilla Firefox က ပန်ဒါနီ
အန်ဂျီအို တိုက်ခိုက်ခံရမူနှင့် ဆက်စပ်၍ အမျိုးသား (...
ရခိုင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်းများလုံခြုံရေးကိစ္စ ဘန်က...
ခြောက်လအတွင်း အလုပ်သင်ဆရာဝန် တာဝန်ထမ်းမည့်သူမရှိ
တည်ငြိမ်ရေး ထိခိုက်စေသဖြင့် သန်းခေါင်စာရင်းတွင် ရု...
သန်းခေါင်စာရင်း သပိတ်မှောက် ရင် မှောက်သူသာနစ်နာမယ်...
နိုင်ငံတကာ ဝီလီဘရန့် ဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံမည်
လယ်တီသိမ် ဖြိုဖျက်တဲ့အပေါ် ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက် (ရုပ်/သံ)
ရွှေစက်တော်တွင် အန္တရာယ်ရှိ စောင်းတန်းကိုပြုပြင်၍ စက...
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ခံမှုကို UNFPA စိုးရိမ်ပူပန်
(၂) နှစ်သား ကလေးငယ်က 999 ထံ ဖုန်းခေါ်ပြီး မိခင်၏ အသ...
သံလွင်မြစ်လက်တက်ပေါ်မှ ရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့် ငြိမ...
Pee Mark မင်းသမီး ပါဝင်မည့် မြန်မာရုပ်ရှင်ကား မေလပ...
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အသုံးမတော်လို့ ပြည့်တန်ဆာဘဝ ရောက်ခဲ့ရ
မိမိကိုယ်ကို ဓါတ်ဆီလောင်မီးရှို့သူ ခန္ဓာကိုယ်သွေးအဆ...
ဆိုင်ကယ်စီးလာသူ လူတစ်ဦးအား ရိုက်နှက်၍ ပိုက်ဆံသိန်...
လေယာဉ်ပျောက် ရှာဖွေရေး ဇုန် ပြန်သုံးသပ်ဖို့လို
စိတ်ဆိုးလား( ဇာဂနာ )
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တွင် အစိုးရပိုင် အရန်ငြွေေ...
မြန်မာရှားပါးမျောက်တွေ မျိုးမပြုတ်ဖို့ တရုတ်နိုင်င...
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြော်ငြာပြီး ပြည်ပကို ထိုးဖောက်တော...
ပဲခူးတိုင်းက ဖယ်ရှားခံရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို DKBA စတင်...
ဦးနေမျိုးဇင်နဲ့ ဦးဝင်းချိုတို့ကို ပုဒ်မ ၁၈နဲ့ ထေ...
မြေနေရာပြန်ပေးရန်အကြောင်း မရှိကြောင်း တိုင်းစစ်ဌာန...